Sidee loo codsadaa Codsiga Ruqsada Hemp ee Illinois?
Sida loo codsado laysanka Hemp ee Illinois
Abriil 30, 2019 - Illinois ayaa soo saartay foomka dalabka hemp. Waxaad ka heli kartaa codsigaaga hemp warshad ee Illinois isku xirka hoose. Waxaan ku faraxsanahay inaan kaa caawinno inaad dhakhso u hesho.
Dhagsii Si Aad U Bilaashid Arjiga Illinois Hemp.
Illinois waxay ka dhigtay dalabka hemp warshadaha mid sahlan in lagu socdo, laakiin geedi socodka oo dhan laga soo bilaabo codsi ilaa abuur ilaa iib ah waa sida aan u caawineyno ganacsatada doonaya inay ku ballaariyaan howlahooda hemp ee gudaha Illinois, si xor ah noogu soo wac si aan uga wada hadalno ujeedooyinkaaga ganacsi ee shirkadda. CBD ama hemp warshadeed.
Warshadaha Hemp ee Illinois Open ee 2019
Sharciga hemp ee Illinois lama ansixin kaliya, laakiin sidoo kale xeerarka ayaa la daabacay, oo macnaheedu yahay inay diyaar u tahay xilligiisii ​​u horreeyay.
Xilliga faallooyinka dadweynaha ee loogu talagalay xeerarka cusub ee Hemp wuxuu dhacay Febraayo 11, 2019, sida ku cad qoraalkii ugu dambeeyay ee Wasaaradda Beeraha Goobaha guud daabacaad. Xeerarka ayaa la dhammeystirey iyo codsiyada hemp warshadaha ee loogu talagalay rukhsadaha si loo beero ama isdiiwaangalinta si loo socodsiiyo hemp ayaa maalin kasta laga filayaa.
Illinois ' Sharciga Hemp warshadaha wuxuu dhaqan gelayaa sanadka dalagga ee 2019. In kasta oo korsada hore ay u soo qaadan karaan faa'iidooyinka qaarkood, sanadihii la soo dhaafay hemp waxay noqon kartaa aragti guud oo ay weheliso hadhuudh iyo soybe ee dhul-beereedka gobolka.
Hemp waa cannabis - Ubax CBD waxay u egtahay ubaxa THC
Qeexitaanka Dhirtu Wershadaha
Qeybta 5 ee Sharciga Hemp warshadaha wuxuu ku qeexaa Hemp warshadaha sida:
"Hemp warshadaha" macnaheedu waa warshadda Cannabis sativa L. iyo qayb kasta oo ka mid ah warshaddaas, ha noqoto mid sii kordheysa ama aan lahayn, oo leh uruurinta 'ttahydrocannabinol delta-9 tetrahydrocannabinol aan ka badnayn 0.3 boqolkiiba oo ku saleysan culeyska qallalan oo lagu koray iyadoo la hoos imanayo shatiga lagu bixiyay Sharcigan ama si kale oo sharci ah ayaa loogu joogaa Gobolkan, waxaana ku jira wax kasta oo dhexdhexaad ah ama badeecad la dhammeeyay oo laga sameeyay ama laga keenay hemp warshadeed.
Aynu siideyno waxa taasi micnaheedu yahay.
cannabis sativa waa hemp, laakiin sidoo kale…
in cannabis sativa uusan lahayn wax ka badan 0.3 boqolkiiba miisaanka qallalan ee THC, iyo
waxaa lagu koray si sharciyeysan, ama haddii kale si sharci ah ayaa looga joogaa gobolka Illinois, iyo
badeecad kasta oo kale oo laga sameeyay ama laga keenay hemp
Miyaad heshay afartaas qodob?
Xeerarka waxaa ku jira xeerarka soo socda:
Qofna ma kori karo hemp la’aantiis la'aan
Qofna ma qaban karo hemp isagoon haysan rukhsad
Dhamaan abuurka, unugyada iyo duulimaadyada waa in lagu cadeeyaa AOSCA.
Booska ugu yar ee rubuc-acre acre ah oo banaanka ah iyo 500 sq.ft. koritaanka gudaha
Arji dhammeystiran waa in loo gudbiyaa gobolka KA HOR koritaanka
Dhawaan, gobolka Illinois ayaa sidoo kale soo saaray shuruudaha codsigiisa ee hemp - waxay yihiin sida soo socota:
Magaca iyo cinwaanka codsadaha
Nooca ganacsiga ama ururka, sida shirkadda, LLC,
shuraako, milkiile keli, iwm.;
Magaca ganacsiga iyo cinwaanka, haddii ay ka duwan yihiin kuwa la soo galiyay
jawaabcelinta hoosaadka (a) (1);
Sharraxaadda sharciga ee aagga dhulka, oo ay ku jirto Meelaynta Caalamiga ah
Isuduweyaasha nidaamka, ayaa loo isticmaali doonaa in lagu beero hemp warshadaha;
Khariidadda dhul-beereedka uu codsaduhu ku qorsheeyo inuu ku kobco warshadaha
hemp, muujinaya xuduudaha iyo cabbirka aagga sii kordhaya ee
acres ama cago laba jibaaran;
Diiwaangelinta caddeynta dhul-beereedka waa beer sida lagu qeexay Qaybta 1-60
ee Xeerka Canshuuraha Guryaha; iyo
Lacagta lagu dabaqi karo $ 1,100.
sida loo helo ruqsadda hemp koritaanka ee gobolka illina?
Haddii meheraddaada canna ay u baahan tahay in lagaa caawiyo liisankoda Weyn Warshadaha, fadlan soo wac qareenada cannabis.
Ama Dhameystir sheekada 'bot bot' ee ay ka sameeyeen websaydhkan. Waan la xiriiri doonnaa!
Dhiirrigelinta Hemp ama Processing
Sharciga 'Hemp Industrial' ee 'Illinois' wuxuu ubaahanyahay ruqsad mid beerida (kobcinta) hemp ah, ama warshadeynta (soo saarida) hemp.
Beerista Hemp Marka la eego Sharciga Illinois.
Qaybta 10-aad ee Sharciga Wax-ka-Saarka Warshadaha ee Illinois ayaa bixinaya shuruudaha dalabka si loo helo rukhsad loo baahan yahay. Asal ahaan, seddex shay ayaa kaliya looga baahan yahay sida uu dhigayo Qeybta 10 (b) sharciga. waxay bixisaa saddex qaybood:
(1) magaca iyo cinwaanka codsadaha;
(2) sharraxaadda sharciga ee dhulka, oo ay ku jiraan isku-duwayaasha Nidaamka Meeleynta Caalamka, in loo isticmaalo in lagu beero hemp warshadeed; iyo
(3) haddii sharciga federaalku ubaahan yahay ujeedo cilmi baaris oo loogu talagalay beerista hemp warshadeed, sharax hal ama in ka badan oo ujeedooyin cilmi baaris ah oo loo qorsheeyay abuurista hemp warshadeed oo ay ka mid noqon karto daraasadda koboca, beero, ama suuq geynta wershadaha; si kastaba ha noqotee, shardiga ujeeddada cilmi-baarista looma samayn doono in lagu xadido iibinta ganacsiga ee hemp warshadaha.
Dheeraad ah, Sharciga Hemp ee Illinois wuxuu usocdaa inuu u baahdo talaabooyin dheeri ah oo ka imanaya beeraleyda Hemp. Waa inay:
leeyihiin hal kormeer sanadle ah oo ku saabsan hawlgalka beeruhu
Tijaabadada inaysan ka badneyn xaddiga loo baahan yahay ee THC
Xeerarka ay dejisay Waaxda Beeraha Illinois ee khidmadaha, saxeexyada iyo foomamka.
Shatiga Illinois Hemp
Ka shaqeynta Hemp Warshadaha
Si ka duwan kuwii hore ee hemp, soo-saareyaasha hemp uma baahna laysan - laakiin waa diiwaangelin keliya.
Qaybta 10 (b-5) waxay bixisaa tan:
Qofku kama shaqeyn karo hemp warshadeed ee Gobolkan isaga oo aan ka diiwaangelinin Waaxda foomka uu qorey Wasaaradda.
Gaar ahaan, ka dib markii aad si sharci ah u korayso hemp - ha noqoto mid ka timid Illinois ama ha ka imaanin - waxaad bilaabi kartaa inaad ka shaqeyso hemp tiro kasta oo waxyaabo waxtar leh - laakiin kaliya ka dib markaad heshid diiwaangelintaada gobolka.
Gunaanad Dhiirrigelinta Dhirta Mashiinka ah ama Socodka
Marka inkasta oo ay u muuqato in kaliya ganacsatada hemp ay u baahan yihiin laysan, soosaarayaasha hemp ee soosaaraya alaabada sida 'CBD' waxay weli u baahan yihiin inay iska diiwaangeliyaan.
Haddii meheraddaada canna ay u baahan tahay in lagaa caawiyo liisankoda Weyn Warshadaha, fadlan soo wac qareenada cannabis at (309) 740-4033.
Laga soo bilaabo cusboonaysiinta ugu dambeysay ee boggan bishii Febraayo 22, 2019, Waaxda Beeraha ee Illinois wali ma aysan bilaabin qaadashada codsiyada. Hadda na soo wac si aan u hubino in marka wakhtigu yimaado - ganacsigaagu uu heli karo rukhsaddiisa hemp warshadeed.